Iyadoon Naafo Ah Ayay Duuliye Noqotay - Xogside-news
Home WARARKA CAALAMKA Iyadoon Naafo Ah Ayay Duuliye Noqotay
Jessica Cox waxay ku dhalatay Bishii Feberweri sanadkii 1983 Arizona ee dalka Maraykanka. Waxayna noqotay qofkii ugu horeeyay dunida ee gacmaha naafo ka ah ee duuliye dayaaradeed noqda (Pilot) isagoo lugaheeda adeegsanaysa.
Naafada gacmaha waa mid ay ku dhalatay laakiin taasi kumay keenin niyad jab, waxay ka qalin jebisay Jaamacadda Arizona sanadkii 2005 iyadoo ka baratay cilmiga Psychology (Cilmi nafsiga) iyo isgaadhsiinta. Waxa kale oo ay computerka ku garaacada lugaheeda iyadoo 25 xaraf garaacda daqiiqadiiba. Sanadkii 2005 ayay duulisay dayuuradii u horaysay oo ahayd kuwa mishiinka keliya leh.
Laakiin bishii October 10kii, sanadkii 2008 aya la siiyay Shahaadada duuliyanimada ka dib markii ay 3 sano oo tababar duuliyanimo dhamaysatay. Wakhtigan waxay duulisaa Dayuuradaha nooc iyadoo dhulka ka fogaataa 10000 feet. Waxayna muujisay in aan naafadu ahayn wax kaa reebayaa nolosha kana dhigayaa mid fashilamay oo quustay.
Previous articleAfartan Sano Iyo Saaxiibtinimo Caaiib Ah!
Next articleMADAXWEYNE FARMAAJO OO SHACABKA SOOMAALIYEED UGU HAMBALYEEYAY MUNAASABADDA MAALINTA CALANKA